Uxanduva lwethu | Imbuyekezo Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Uxanduva lwabantu, uluntu kunye nokusingqongileyo
Namhlanje "uxanduva lwentlalo yoluntu" yeyona milomo ishushu kwihlabathi liphela. Ukusukela ekusekweni kwenkampani ngo-2010, kwiGroupeve uxanduva lwabantu kunye nokusingqongileyo kudlale eyona ndima ibalulekileyo, eyayihlala ikhathaza kakhulu umsunguli wenkampani yethu.
Wonke umntu ubalwa
Imisebenzi ekhuselekileyo / yokufunda ubomi bonke / uSapho kunye neKhondo lomsebenzi / isempilweni kwaye ikulungele ukuya kumhlala phantsi. KwiGroupeve, sibeka ixabiso elithile ebantwini. Abasebenzi bethu ngabona basenza inkampani eqinileyo, siphathana ngembeko, uxabiso kunye nomonde. Ukugxila kwethu kubathengi okwahlukileyo kunye nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa kuphela ngale ndlela.
Iimveliso zokonga umbane / Ukupakisha izinto zokusiNgqongileyo / ukuThutha okusebenzayo
Kithina, khusela iimeko zokuphila zendalo kangangoko sinako. Apha sifuna ukwenza igalelo kwindalo esingqongileyo kunye neemveliso zethu, kwimveliso yabo, abantu abaninzi baya kusebenzisa amalaphu ethu ukuphucula ukusebenza kwamandla eofisi nakwizakhiwo zokuhlala.
Masiyithande indalo; masikonwabele ukukhanya kwelanga.
Uncedo lwenyikima / Nikela ngezinto zokukhusela / imisebenzi yesisa
Iqela elisoloko lithatha uxanduva ekwabelwana ngalo malunga neenkxalabo zoluntu. Sithatha inxaxheba ekupheliseni ubuhlwempu ekuhlaleni. Ukuphuhliswa koluntu kunye nokuphuhliswa kweshishini ngokwalo, kufanele sinike ingqalelo ngakumbi ekunciphiseni ubuhlwempu kwaye sikuthwale ngcono noxanduva lokuphelisa intlupheko.